Orinasa tavoahangy fitaratra - Mpanamboatra tavoahangy vita amin'ny vera, mpamatsy
Ny ronono, ny ranom-boankazo, ny rano dia azo tehirizina ao anaty kaontenera tery anaty rivotra nefa tsy mandray ny toerana fantsom-bokatra voafetra.
Tavoahangy vita amin'ny ronono miaraka amina fehiloha voaporofo amin'ny harafesin'ny rivotra mba hanomezana anao traikefa fisotro mahasalama indrindra.
Mety ho an'ny ronono, ranom-boankazo tianao indrindra, ahetsiketsika, malama, cocktails, na rano tsotra fotsiny.
Tavoahangy rano misy satrony fiarovan-tratra mba hanomezana anao traikefa fisotro mahasalama indrindra.
Lavorary ho an'ny sakafo maraina, BBQ, fety zaridaina, fampakaram-bady, piknikana, fitsangatsanganana amoron-dranomasina ary maro hafa !.
Tavoahangy divay romainina vita amin'ny divay 1000ml
Mampiseho ny divay, whisky na zava-pisotro tsara indrindra ao amin'ity decanter tsara tarehy ity
Ny stopper dia mifanentana tanteraka any an-tampon'ny decanter mba hamehezana ny rivotra hisorohana ny fisehoan'ny oxygencognac / brandy, toaka na vodka
Vita amin'ny vera avo lenta sy matevina miaraka amina vera mafy
Ny fanampiana tsara indrindra amin'ny trano fisotroanao ary koa manome fanomezana mahafinaritra ho an'ny fotoana manokana
100ml Travel cosmetika dia feno tavoahangy
Kaonty chic tsara tarehy ho an'ny kosmetika
Tavoahangy vita amin'ny tontolo iainana voafafa indray vita amin'ny crème kosmetika tavoahangy fitahirizana tavoahangy
Tonga lafatra amin'ny fakana santionany na famonjena ny aloky ny maso, makiazy, menaka ary kosmetika hafa.
Fampisehoana tsara famehezana, fiarovana ary kalitao tsara.
Ny crème cool 100ml dia tavoahangy mitokana
Tonga lafatra ho an'ny menaka, menaka fanosotra, vovoka ary menaka manitra.
Ny fonony dia manana faribolana volafotsy tsara tarehy, tsara tarehy.
Namboarina tamin'ny plastika polypropylene kilasy sakafo (tsy misy BPA)
Tonga lafatra amin'ny dia ary mifanaraka tsara amin'ny kitapom-bolanao.
Tavoahangy misy menaka esina vera 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml
Ity vokatra ity dia manohana: ny lamba landy, ny fametahana mafana, ny fanala, ny famafazana, ny fanodinana etsy ambony dia mitaky ny hanomezan'ny mpanjifa ny sora-tanana famolavolana, ny fe-potoana fandefasana dia 7-10 andro, lesoka kely, fahasamihafana amin'ny loko, sns. serivisy ho an'ny antsipiriany
Tavoila zava-pisotro vita amin'ny vy tsy misy fangarony 1000ml
Ny tavoahangy tsirairay dia misy fampiasa BPA tsy misy fampiasa azo avy amin'ny plastika azo ampiasaina azo ampiasaina indray- Cap 48 MM misy tombo-kase henjana. Mikatona ary mamono ny takelaka fa mitazona tombo-kase misy fivoahana
MADE IN USA - Tsy misy tsiro ratsy intsony ary tsy misy akora simika miditra ao anaty zava-pisotro misy anao, ity vera ity dia tsy misy firamainty, azo ampiasaina, azo averina am-paosy 100% ary sariaka ara-tontolo iainana.
Tavoahangy fitaratra matevina misy kalitao manokana no natao hampiasaina isan'andro ary hampiasaina indray, matevina kokoa ary mateza kokoa noho ny "vera azo ampiasaina". Azo antoka ny fanasana lovia
Fanangonan-tsakafo - Namboarina manokana hifanaraka amin'ny talantampon'ny vata fampangatsiahana indrindra rehefa manampy ny tavoahangin-dronono vita amin'ny ronono
Tavoahangy fisotro misy vera mazava 1000ml
Ny siny tonga lafatra hanatsarana sakafo sy zava-pisotro mahasalama mahasalama, toy ny kombucha, kefir, sauerkraut, kimchi; ny azo atao tsy misy farany!
Afaka mitahiry ampahany betsaka amin'ny voankazo tianao sy legioma tianao toy ny karaoty, asparagus, poars, voatabia, peppers ary maro hafa.
Toerana tsara hitehirizana oats, lafarinina, siramamy, sakafon'alika, na tsakitsaky! Azonao atao ihany koa ny mitahiry saosy pizza, salsa, gazpacho, ron-kena ary syrup misy maple ao anaty siny koa!
Tavoahangy fanosotra tavoahangy vera 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml
Press / Spray Safidy tsara ho an'ny trano, misy takelaka fanaovan-gazety roa.
Ny fitaovana fitaratra tsy misy firamainty azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana dia manamora ny fampiasana azy.
CONSTRUCTION DURABLE: Ny tavoahangy ambony tampoka dia vita amin'ny vera matevina sy mateza ho fanoherana tsara ny fiovan'ny fiatraikany sy ny mari-pana. dia vita amin'ny polypropylene kalitao faran'izay tsara ary ny kapila tariby dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony ho fanoherana ny harafesina tsara.
SORATRA LEAKPROOF & TIR AIR: Ny satroka azo averina dia manome antoka fa ho vaovao ny atiny ao anatin'ny andro nitahirizanao azy. Ny rakotra tavoahangy fanaovana tavoahangy manaparitaka dia mamorona sakana tsy ahona izay mitazona ny zava-pisotro voaisy tombo-kase ary misoroka ny gazy karbonika sy ny fifangaroana.
Fampiasana midadasika: ny tavoahangy misy vera miaraka amina tampona dia azo ampiasaina hitahirizana ny zava-drehetra manomboka amin'ny ranom-boankazo, vinaingitra, zava-pisotro sy rano hatramin'ny menaka, kefir, kombucha, labiera, ronono, syrup ary maro hafa. Amin'ny haben'ny 1 litatra dia hanana be dia be ianao amin'ny fanompoana amin'ny fety manaraka.
SAFE & ECO-FRIENDLY: tavoahangy ambony Swing maimaim-poana BPA ary tsy misy poizina, simika, phthalates ary firaka, ka mahatonga azy ireo safidy azo antoka kokoa noho ny tavoahangy plastika. Amin'ny alàlan'ireto tavoahangy fitaratra azo ampiasaina ireto dia azonao atao ny manapaka ny fampiasana plastika ao an-tranonao.
50ml tavoahangy plastika fonosana vita amin'ny plastika azo tavoahangy mitokana
【MAHASOA HATRANY】 Vita amin'ny fitaovana avo lenta, maharitra sy azo entina, azo antoka sy salama, malefaka sy maivana, mitahiry habaka, azo ampiasaina indray, mora ampiasaina sy apetraka.
【SMART STORAGE】 Ny habe mety indrindra dia mety kokoa amin'ny toerana tery na zoron'ny efitrano. Izy io dia afaka manasokajy ny entanao ranon-javatra mba hitahirizana sy hampiasaina mora foana ary hitandrina ny tranonao hadio sy hadio.
【FAMPIASANA VERSATILE】 Mety ho an'ny ranomanitra, otrikaina, potion, toaka ary zavatra hafa misy ranoka. Manaparitaka ranon-javatra mahomby amin'ny fanasokajiana sy mora ampiasaina.
【AZO ATAO sy azo ampiharina】 Mety amin'ny habe sy mora entina izy io. Azo ampiasaina amin'ny fitsangatsanganana an-kalamanjana mba hitahiry sy hitehirizana entana misy ranoka tianao hoentina.
Tavoahangy zava-pisotro misy jiro 500ml
Tavoahangy zava-pisotro vita amin'ny alimina 500ml